न्यूज सञ्जाल: » अलैँची थन्काउन पूर्वी पहाडमा कामदार अभाव !
अलैँची थन्काउन पूर्वी पहाडमा कामदार अभाव !
न्यूज सञ्जाल २५ आश्विन २०७६, शनिबार १८:४३
पाँचथर । अलैँची टिप्ने सिजन सुरु भएसँगै पूर्वी पहाडी जिल्लाका किसानलाई यतिखेर अलैँची थन्क्याउन भ्याइ नभ्याइ भएको छ । चाडपर्व मनाउन छाडेर किसानहरु अलैँची थन्क्याउने काममा लागेका छन् ।
पूर्वी पहाडी जिल्लाको मुख्य नगदे बालि अलैँची यतिखेर पाँचथरसँगै ताप्लेजुङ र इलाम लगायतका जिल्लाहरुमा टिप्ने सिजन सुरु भएको छ । भदौको अन्तिमबाट सुरु भएर कात्तिक महिनाभर यहाँका किसानहरुलाई अलैँची थन्काउन भ्याइनभ्याइ हुने गर्दछ ।
पाकिसकेको अलैँची समयमै नटिपे बोटमै कुहिने साथै जंगली जनावरहरुले खाने हुनाले समयमै टिप्नु पर्दछ ।
अलैँचीे दशैँ, तिहारजस्ता पर्वको समयमा पाक्ने हुनाले बर्सेनि चाडपर्वको समयमा अलैँची थन्काउन भ्याइनभ्याइ हुने गरेको फालेलुङका अलैँची किसान राजकुमार लिम्बूले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अलैंँची टिप्न भ्याइनभ्याइ छ, चाडपर्व भनेर हुन्न, समयमै नटिपे बोटमै कुहिएर जान्छ, टिप्नै पर्छ।’
अलैँची टिप्न कामदारको अभाव भएको पनि किसानहरुले बताएका छन् । गाँउघरमा भएका युवा विदेशिने तथा पढाइको सिलसिलामा शहरतिर बस्ने हुनाले कामदारको अभाव भएको अर्का किसान याम लिम्बूको भनाइ छ ।
उत्पादन घट्ने सम्भावना
विशेष गरेर अलैँची फुल्ने समयमा यसवर्ष लामो समय खडेरी परेकाले अलैँची उत्पादन घट्ने किसानहरुले बताएका छन् । अलैँचीलाई पानी चाहिने चैत, वैशाखमा खडेरी लागेपछि अलैँचीको बोट मरेका कारण उत्पादनमा गिरावट आउने भएको हो । यो समयमा फल लाग्नको लागि अलैँची फुल्ने गर्दछ ।
अलैँची विकास केन्द्र फिक्कल इलामका अनुसार ताप्लेजुङमा चार हजार १ सय ५० हेक्टरमा अलैँची खेती हुने गर्दछ जुन नेपालमै सबैभन्दा धेरै हो । यस्तै पाँचथरमा १ हजार ७ सय ३७ र इलाममा १ हजार २ सय हेक्टर जमिनमा अलैँची खेती हुँदै आएको उज्यालो अनलाइनमा खबर छ ।